Ugu yaraan 7 qof oo lagu dilay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ka dhacay Afgooye - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 7 qof oo lagu dilay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ka dhacay Afgooye
December 29, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Askari katirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ilaalo kahaya wado u dhow buundo kutaala magaalada Afgooye ee Soomaaliya. [Xuquuqda Sawirka: Reuters]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan todob qof oo ay kamidyihiin saddex katirsanaa ciidamada NISA iyo afar dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ayaa ku dhimatay kadib markii dagaal culus ka qarxay magaalada Afgooye oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab maanta oo Khamiis ah, sida uu sheegay sargaal NISA katirsan oo ay soo xigatay wakaalada wararka Anadolu.
Cabdiraxmaan Axmed Xasan, oo ah sargaal NISA katirsan ayaa wakaalada wararka Anadolu u sheegay in dagaalku uu qarxay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerareen saldhig ciidamadu ku leeyihiin magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
“Saddex kamid ah ciidamadayada ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay dhaawacmeen intii uu dagaalku socday. Waxaanu dilnay afar maleeshiyo Al-Shabaab ah. Waxaana nolol ku qabanay saddex ,” ayuu Cabdiraxmaan u sheegay wakaalada wararka Anadolu.
Afgooye waa magaalo beereed qiyaastii 30 km dhanka koonfurta-galbeed uga beegan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar sanadkan, ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhimatay weerar ay Al-Shabaab kusoo qaadeen magaalada Afgooye.
Al-Shabaab ayaa dibada looga saaray intooda badan magaalooyinka kuyaala koonfurta Soomaaliya, balse maleeshiyadu wali waxay qaadaysaa weeraro ku dhufoo ka dhaqaaq ah oo lid ku ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogaga AMISOM.
October 23, 2016 Maleeshiyada Al-Shabaab oo la wareegay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least one Al-Shabab fighter was killed in US airstrike in southern Somalia, US Africa Command said in a statement. “In coordination with the Federal Government of Somalia, U.S. forces conducted a precision [...]
Wasiirka cusub caafimaadka dowlada federaalka Soomaaliya oo xilka la wareegay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiiradii hore caafimaadka dowlada federaalka Soomaaliya Xaawo Xasan Maxamed ayaa maanta oo Axad ah si rasmiya xilka ugu wareejisay wasiirka cusub ee caafimaadka Maxamed Xaaji Cabdinuur. Munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah meelmariyay ajandaha kalfadhigooda 46-aad ee socda. Waxyaabaha kamid ah ajandaha ayaa ah la xisaabtanka xukuumada, arrimaha xuduudaha Puntland iyo gobolada Sool iyo Sanaag, iyo dib [...]